Mpanamboatra sy mpamatsy fitsapana fahamarinana i Sina | tsara
Integtest ® Serial Integrity Tester dia natao hanandramana ny fahamendrehan'ny sivana sy ny rafitra sivana. Nihaona ny fitsapana mba hanamarinana ny sivana voadio ao amin'ny FDA, ireo fepetra takiana amin'ny famaritana ny fanjakana Farmacopoeia ary ny GMP. Ny V4.0 Integrity Tester dia matevina, mora ampiasaina, ary fitaovana fitsapana fahamendrehana mandeha ho azy, izay manatanteraka teboka miboiboika, fantsom-panafarana, teboka manjavozavo ary fitsapana miorina amin'ny rano ho an'ny sivana hydrophobic. andrana ny sivana hydrophobic hamaly ny filan'ny mpanjifa samihafa.
◇ Ny sonia sy fanasokajiana elektronika hanavahana ny andraikitra mora foana ary hisorohana ny fiasan-disoka;
◇ Fampisehoana ny angona andrana sy ny fiolahana amin'ny fotoana tena izy, fanaraha-maso ny fizotry ny fitsapana rehetra;
◇ Manome ny endriny fanontana mandeha ho azy, ny mpampiasa dia afaka miasa tsotra sy mora kokoa;
Test Fitsapana miorina amin'ny rano (WH) ho an'ny sivana Hydrophobic: mampiasa rano voadio ho ranon-javatra fanadinana fa tsy IPA sy Ethanol, amin'izay dia hialana amin'ny fahalotoan'ny etanol na IPA rehefa manadio sivana;
◇ Ny fitaovana dia afaka mitahiry firaketana sy fiolanan-tantara 500;
Fanerena miasa faran'izay betsaka
Fanerena miasa minimum
400mm (halavany) X380mm (halalin'ny) X335mm (haavo)
V an'ny WH: ± 4%
Hatrany ambony: ± 4%
Temperature: 20 ℃ ± 15 ℃; hamandoana: 45 ± 35%
Fitsapana ambony ambany: 5min ± 2min;
Fitsapana D haingana: 10min ± 2min
Fitsapana BP fototra: 15min ± 2min
Fitsapana nohatsaraina: 20min ± 2min
Masontsivana fampidirana & angon-drakitra vokaranao ary ny vokatra sinoa
Firaketana ny tantara
Firaketana fanandramana 500 + fiolahana sary
Series I / O
Sinoa na anglisy
Teo aloha: sivana kapsily
Manaraka: Aforeto ny sivana vy tsy misy fangarony